Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo walaac xooggan ka muujiyay aftida dastuurka | Baydhabo Online
Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo walaac xooggan ka muujiyay aftida dastuurka
Dalka Kenya waxaa sii xoogeysanaya doodda ku saabsan in isbaddal lagu sameeyo dastuurka la meel mariyay sannadkii 2010-kii,waxaana dalka ka jiraa is-xulafaysi ay wadaan dhinacyada ku kala aragti duwan aftida la doonayo in wax looga baddalo dastuurka.
Hoggaamiyeyaasha kasoo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa dadaal ugu jiraa sidii ay u difaaci lahaayeen danaha dadka xoola dhaqatada ee gobolkaasi kasoo jeedo.
Xildhibaan Aadan Keynaan oo laga soo doorto deegaanka Celdhaas oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in dastuurka hadda jira uu fursad siiyay dadka reer guuraaga ee ku nool gobolka isla markaasna ay ka hortagi doonaan waxyaabaha aanan ka shaqaynaynin horumarka shacabka gobolka.
Wuxuu yiri ” Miisaaniyadda afartii sanno ee lasoo dhaafay soo gashay Wajeer, Mandheera ama Gaarisa waxay u dhigantaa tiii soo gooshay 50-kii sanno ee lasoo dhaafay” ayuu yiri xildhibaan Keynaan.
Xisbiyada siyaasadda ee Kenya ayaa ku kala aragti duwan aftida, qaar kamid ah waxay doonayaan in jagooyin badan lagu kordhiyo hoggaanka dalka halka qaar kalena ay qabaan in la sameeyo nidaam baarlamaanka ay ku dooranayaan ra’iisul wasaare isla markaasna xisbiga ugu badan kuraasta baarlamaanka uu qaadanayo jagada ra’iisul wasaaraha, sida uu sheegayo Aadan Keynaan.
Dadka qaar ayaa doonaya in la sameeyo nidaamka ah in Kenya laga sameeyo jago ra’iisul wasaare oo aanan awood badnayn oo hoostimaato madaxweynaha.
Xildhibaan Aadan Keynaan wuxuu sheegay in dadka qaar ay u ololaynayaan in la dhimo tirada maamulada dalka ka jiro sii loo yareeyo dhaqaalaha badan ee ku baxaya dowladaha hoose.
” Wixii faa’ido inoogu jiro haddii aan nahay dadka xoola dhaqatada in aan gacan siinno, afti marka la dhaho waa loo codeeyay, codeyn marka la dhaho arrin adag weeyaan, waana ku adkaani dadka waxay haystaan in laga qaado oo ay ogolaadaan” ayuu yiri Aadan Keynaan.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay soo xusheen qareenno soo uruurinayaan qodobada kala duwan ay cid kasta doonayso in loo meel mariyo si ay uga hortagaan wax kasta uu dhibaato ku reebi karo ayna ilaaliyaan qodob kasta oo faa’ido ugu jiro shacabka xoolo dhaqatada ee gobolka waqooy bari.
Dadkii Tarmuusyada iska jajabiyay oo war kale uu ka soo yeeray
Wajeer oo ka dibadbaxday macallimiin laga badelay
Dhanka kale, hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo dhawaan ka hadlayay deegmada Madogaashe ayaa sheegay inaysan diidanayn aftida balse laga qayb geliyo wadahadallada looga tashanayo aftida la doonayo in isbaddal lagu sameeyo dastuurka.
Ducaale wuxuu sheegay inay jiraan dad wado qorshe ah in la dhimo tirada deegaan baarlamaaneedyada deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay kasoo jeedaan ayna ka hortagi doonaan tallaabo kasta oo arrintaasi lagu fulinayo.